Nagu saabsan - Shaoxing Starke Textile Co., Ltd.
Hacci funaanad dhogor ah
Dhar isku xidhan
Kala Bixi Dharka
flannel suuf ah
Alaabada dib loo warshadeeyo
4 way kala fidsan tahay Fabric
dhar tolmo leh
SHAOXING STARKE TEXTILE CO., LTD waxaa la aasaasay sanadkii 2008, kuna takhasusay dharka la tolay iyo dharka tolmo wanaagsan leh.
Shirkad waliba waxay leedahay dhaqan u gaar ah. Starke had iyo jeer waxay u hoggaansantaa falsafadeeda iibka, "Macaamiisha Koowaad, Ujeeddada Horumarka". Iyada oo ku saleysan mabda'a ah "Daacadnimada Koowaad", waxaan dhiseynaa iskaashi guuleysi leh oo lala yeelanayo macaamiisheenna sharafta leh, waxaana ka wada shaqeyneynaa sidii aan u gaari lahayn guusha macaamilka isla markaana u abuuri lahayn sumad caan ah "STARKE"!
Ganacsiga guuleysta wuxuu kuxiranyahay koox wanaagsan. Starke waxay leedahay koox xirfadlayaal ah oo xirfad wax iibisa ku hoos jirta maamul wanaagsan. Xamaasad iyo firfircooni, kooxdeena ayaa had iyo jeer halkan u joogta si ay u bixiyaan adeeg dhameystiran oo tayo sare leh. Hadafkeenu waa inaan bixino jawaabo sax ah oo lagu qanco oo ku saabsan baahiyaha kala duwan ee macaamiisheenna iyo inaan xiriir dhow la yeelano iyaga.
Shirkadayadu waxay haysataa shahaadooyin sida GRS, OEKO-TEX 100, iyo warshadeynta midabaynta iyo midabaynta daabacaaddeena waxay kaloo leeyihiin shahaadooyin badan sida OEKO-TEX 100, DETOX ， iwm. Mustaqbalka, waxaan isku dayi doonaa inaan soo saarno maryo badan oo dib loo warshadeeyay oo aan wax ku biirino deegaanka adduunka.
Waxa aan qabano
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay ayaa ah: Dharka Taranka leh iyo Dharka la Xidhay. dhinac, Berber dhogorta, 100% Cotton CVC 100% Polyester Single Jersey, Beads Fishnet Fabric, Honeycomb Fabric, Rib Fabric, Warp-knitted Mesh, 4-way Spandex Fabric, iwm Marooyinkayaga Duuban waxaa ka mid ah T / R Suiting Fabric, 100% Cotton / PC Fabric Work, 100% Cotton Dye Active Dabiicadda iyo 100% Cotton / TC / TR Jacquard Fabric
Cinwaanka: No.70, Haitang Road, Paojiang Zone, Shaoxing City, China.